Archdiocese of Mandalay blog: 2011
ထူးဆန်းတဲ့ကြယ်ကြီးကလည်း အလင်းတန်း တွေဖြာထွက်လို့ပေါ့ . . . ။
အဲဒီအချိန်မှာ ကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာရှိတဲ့ လူသားတွေကလည်း
ကိုယ်စီကိုယ်စီမာနတွေနဲ့ ၀ံ့ကြားကြားလို့ပေါ့ ဒါပေမဲ့ဒီညသန်းခေါင်ယံအချိန်မှာ
လူသားတစ်ဦးထူးဆန်းစွာမွေးဖွားလာခဲ့ပါတယ် . . . ။
လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ၊ မာန်မာနတွေ လည်းပျောက်ဆုံးသွားကြရတယ်။
ချစ်မေတ္တာတန်ခိုးတော်၊ ဣနြေ္ဒ၊ အလှတရား၊ သစ္စာတရားတွေနဲ့ ဖွားမြင်လာခဲ့တဲ့
ဗက်သလင်မြို့၊ နွားစားခွက်အတွင်းမှာ စံနေတော်မူတဲ့
မောင်စိုး (ခေတ္တ နေပြည်တော်)
Posted by သိုးထိန်းအသံ at 3:31 AM